www.xamarcade.com » Midowga Afrika oo sheegay in Maamul Goboleedyada ka caawin doonaan Sugitaanka Amniga.
Midowga Afrika oo sheegay in Maamul Goboleedyada ka caawin doonaan Sugitaanka Amniga.
Wakiilka Gudoomiyaha Guddiga Midowga Africa ee Soomaaliya ayaa maamul goboleedyada Soomaaliya ugu Baaqay in ay kordhiyaan Dagaalka ka dhan ka ah Al-shabaab.
Francisco Madeira, Hadalkaan sheegay mar uu kulan la qaatay Madaxweeynaha Hirshabeele Maxamed Cabdi waare oo ay ka wada hadleen Qorshaha Xasilinta iyo Amni ku wareejinta Ciidamanka Soomaaliyada.
“Waxaan ka wada Hadalnay faahfahinadda kala guurka waxaana isla aragnay in kala gurku uu adkeeyn u bahanayahay iyo waxa aan u maleeyneeyno in Ciidaadu ay ka qaybqaataan iyo muhiimadda ay leedahay in wadooyinka Muhiimka ah ay furan Ciidamadda AMISOM iyo kuwa Soomaaliya” ayaa lagu yiri war uu soo saaray Faransico Madera.
Madera ayaa sheegay in Maaml goboleedyadda Dalka looga baahanyahay in ay kaalin Libaax ka qaatan Dagaalka lagu jiro Als-habaab, wuxuuna Xusay in ay Maamuladdua ay Masuuliyad iska saaraan Sidii ay Goboladooda Al-shabaab uga Xoreeyn lahaayeen.
Maxamed Cabdi waare iyo Madera ayaa isla soo hadal qaaday Qasarihii Ciidamada AMSIOM ka soo gaaray Weerarkii Dhawaan Al-shabaab ay ku qaadeen Ciimo Dalka Burundi ka socday oo ku Sugnaa Shabeelaha dhexe.